WAXTARKA XUSKA IYO XUSUUSTA RABBI LEEDAHAY. – Sumcadda Islaamka
Nadaafadda iyo Daahirnimada joogtada ah ee Jirka waxay kaa ilaalisaa Cudurada jirka ku dhaca.
Sidoo kale Nadiifinta iyo Daahirinta joogtada ah ee Ruuxda waxay kaa ilaalisaa Cudurada Nafsadda ku dhaca.
Cudurada jirka waxaa lagu daweeyaa Cunto iyo Dawo,
Cudurada Nafsadana waxaa lagu daweeyaa diin iyo cibaado iyo weheshiga Eebaha weyn ee waxa jira oo dhan agaasimay.
Fariimaha wanaaga,raxmadda iyo khayrka ee ay Diintu daaran tahay waa kuwa qofka dahira oo daganaansho nafsadeed siiya,kuwaas oo aan lagu heli karin cunto iyo dawo kale toona.
Afkaaraha toolmoon iyo Enerjiga Akhlaaqda fiican waa kuwo qofka u jiidi kara jir caafimaad qaba iyo ruux nool oo dambiyada iyo waxa xilli iskala weyn.
Eebe wuxuu yiri:-
” ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) “
“Waxaa liibaanay midka Nafsadda nadiifiya oo ka dheereeya xumaha,oo inta uu magaca Rabigii xuso dabadeedna ducaysta oo dukada”.
Magaca Rabbi waa “Code”ka ama furaha laga galo guusha iyo xasiloonida Nafsadda,waa wax uu isugu talo galay Allaha agaasimay intaba.
Kaliya waxay intaasu wax u tarayaan qofka Aamina ee si dhab ah u Rumeeya awoodda Rabigii.
“الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)”
“Kuwa rumeeya ee ay quluubtooda ku xasilayso xuska Eebe,war ku baraaruga eh xuska Eebe iyo xasuustiisa uun bay quluubta ku xasilaysaa”.
Cuskashada magaca Eebe ee ah agaasimaha jirsiiyay waxa jira oo dhan ee aad adiga ka midka tahay waa sirta guusha kuwa fahamsan,
Ku dhawaaqidda Erayo carrabka ku sahlan laakiin aan waxtarkooda la qiyaasi karin ayay siwalba oga dhigan yihiin magacyada iyo sifooyinka Eebe ood afka ku haysaa in badan oo waqtiyadaada ka mid ah.
Waana sababta uu suubanuhu dadka ugu dardaarmi jiray waqti walba.
عن عبد الله بن بُسر قال: “أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: يا رسول الله! إنَّ شرائعَ الإسلام قد كثُرت علينا، فبابٌ نتمسَّك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عزَّ وجلَّ” خرَّجه الإمام أحمد، وخرَّجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان”
“Rasuulka scw nin baa u yimid oo ku yiri:-Rasuulkii Allow shareecooyinkii baa nagu bataye bal wax aan ku dhagno oo khayrka oo dhan noo jamciya noo sheeg?!Rasuulka scw wuxuu ku yiri:-“Carabkaaga yuusan ka suulin inuu hadba yahay mid ka qoyan dikriga Eebe”.
Subxaanallaah ood tiraahdaa ayaa inta adiga iyo samada u dhaxeysa buuxinaysa khad iyo layn degdeg ahna kaaga soo xiraysa Rabbi.
waayo waa kalmad wanaagsan oo uu xiriir kaaga dhigay adiga.
“إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ “
“Eebe waxaa xagiisa ufuula kalmadda wanaagsan,camalka iyo falka sanna waa loo koryeelaa”.
Kolka aad carrabka iyo qalbiga ka noqoto Daakir daqiiqad kasta oo uu nafis helo ku nasta magacyada Rabbi iyo sifooyinkiisa suuban oo misana ku ducaysta,yuusan shaki kaa galin in uu Eebe garabkaada yahay,dambiyada kuu dhaafayo oo uu danahaagana xallinayo.
Kaliya si yaqiin iyo qalbi ah Rabbi u xus.
“وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)”
“Ragga iyo Dumarka in badan Eebe Xusa wuxuu Eebe u diyaariyay dambi dhaaf iyo abaal marin weyn”.